Iipali zePossum-iParadesi yaseWaterfront ePalm Beach - I-Airbnb
Iipali zePossum-iParadesi yaseWaterfront ePalm Beach
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguHomemade Holidays
UHomemade Holidays yi-Superhost
IPossum Poles yindawo yokuhlala etofotofo ephambi kwamanzi ebekwe elunxwemeni lweCareel Bay, ePalm Beach eOstreliya. Kwabo kuni bafutshane ngexesha sinikezela ngokubhukisha okukhethekileyo kobusuku obu-2 ngoLwesihlanu/ngoMgqibelo ukusuka ngoFebruwari ukuya kuDisemba. Ngethuba lenyanga yeholide kaJanuwari kukho ubuncinane beentsuku ezintathu zokuhlala.
Ukuba ujonge iholide esecaleni engasemanzini esecaleni, kunye nokukhululeka kwababuki zindwendwe kunye nezithuthi zikawonke-wonke kwinqanaba lakho lomnyango, ke iiPossum Poles zikulungele wena.
IPossum Poles yindawo yokuhlala etofotofo ephambi kwamanzi ebekwe elunxwemeni lweCareel Bay, ePalm Beach eOstreliya.
Ngoyilo lwenqanaba lolwahlulo lolwakhiwo, i-duplex ithatha wonke umgangatho osezantsi weli khaya linemigangatho emininzi, ikunika amava okugqibela angaphambili emanzini.
Ibandakanya igumbi elikhulu lokulala elineembono ezimangalisayo zePittwater, indawo yethala leencwadi ye-mezzanine, kunye nesicwangciso esivulekileyo sokuhlala, indawo yokutyela kunye nekhitshi evula indawo enkulu yokonwabisa, indawo ye-BBQ, i-spa yabantu aba-4 kunye nenqanaba lengca.
I-Possum Poles ingaphambili emanzini ukuya kunxweme olunamaza, ikunika ibhonasi yolwandle oluyi-50m ukuze udlale kumaza aphantsi, kunye namanzi anzulu ukuze uqubhe kumaza olwandle. Ngokwenene ngamava awodwa, abonelela ngemekobume eyonwabisayo nekhuselekileyo xa kuthelekiswa namanzi anzulu kunye neepropati ezingaphambili zolwandle.
Ekupheleni kosuku, pheka isidlo kwi-BBQ ye-gourmet kunye nembono engcono kakhulu edolophini, okanye uhlale phantsi kwaye ujabulele ukutshona kwelanga okusoloko kutshintsha phezu kweglasi ye-champagne kwi-spa yangaphandle.
Kukuhambo lwemizuzu emihlanu kuphela okanye uhambo olufutshane lwebhasi ukuya kwidolophu enomtsalane yaseAvalon, okanye igama elidumileyo kwilali yasePalm Beach kunye nolwandle lolwandle.
Nceda uqaphele ukuba ukufikelela kusetyenziswa izinyuko ezininzi kwaye ke loo propati ayibafanelanga abantwana abangaphantsi kweminyaka emi-5, abantu abadala okanye ukungahambi kakuhle.
Le ngokungqongqo ayisiyondlu yetheko kwaye okwangoku ilinganiselwe kubantu abadala ababini.
Akukho zilwanyana zasekhaya zivumelekileyo.
I-Master Bedroom enebhedi yokumkanikazi, eyakhiwe ngengubo kunye nemibono yePittwater.
Vula i-loft yeplani enendawo yokufunda.
Igumbi lokuhlala elivulekileyo, igumbi lokutyela kunye nekhitshi, ukuvula ngeengcango eziphindwe kabini ukuya kwindawo enkulu yokonwabisa enendawo ye-spa yabantu aba-4.
Umlilo omkhulu werhasi ogcina ifulethi lipholile kwaye lifudumele kakuhle kwiinyanga zasebusika.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinesitovu, i-oveni ye-convection/microwave, isitya sokuhlamba izitya esigcweleyo kunye nefriji.
Igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nebhafu encinci.
Impahla ngomatshini wokuhlamba.
Gourmet BBQ kumngangatho.
I-Palm Beach yenye yezona ndawo zintle zintle zaseSydney. Ijikelezwe ngamanzi, ulwandle kwelinye icala kunye nechweba elimangalisayo, iPittwater, kwelinye. I-Possum Poles ikwindawo engaphambili yasePittwater, hamba nje izinyuko ezimbalwa ukusuka egadini ukuya elunxwemeni. Ukuba unephenyane lakho ungafika ngamanzi.
I-Pittwater kunye nemijelo yamanzi ejikelezileyo yiparadesi yamaphenyane. Unokukhwela iinqanawa ezininzi ukusuka ePalm Beach Wharf. Khetha kuhambo olufutshane lokuya nokubuya ngaphakathi kwePittwater ngokwayo apho unokubona ama-wallabies esidla e-The Basin kwaye aqubhe echibini apho. Kungenjalo ungaya kude ukuya eBroken Bay kwaye undwendwele iPatonga okanye i-Ettalong kwaye mhlawumbi uloyiwe yipod yeedolphin njengoko zihlala zibaleka ecaleni kwezikhephe. Enye indlela kukuhamba ngenqanawa ngeBroken Bay ukuya kuMlambo i-Lower Hawkesbury kunye ne-Cowan Creek kwaye ube nesidlo sasemini e-Cottage Point okanye e-Bobbin Head.
Ukuba uziva unamandla okuhamba ecaleni kwesanti ekumlomo wePittwater kwaye uqhubeke ukuya eBarrenjoey Lighthouse ukusuka apho uya kufumana iimbono ezimangalisayo ze-360 degree of peninsula, Pittwater kunye nolwandle. I-lighthouse idla ngokuvulelwa iindwendwe ngeempelaveki kwaye kufanelekile ukutyelelwa.
INorth Palm Beach likhaya lomdlalo kamabonwakude odumileyo 'eKhaya kwaye Ungekho' kwaye ke unokuhlala ubabamba befota apho. Ngaphandle kweelwandle zayo ezinesanti evulekileyo evulekileyo, iNorth Palm Beach ineendawo ezinengca ezininzi apho unokuhamba khona, ipikiniki okanye undwendwele ikhefi ukuze ufumane isiselo kunye nokutya okumnandi. Kukwakho nendawo yegalufa enemingxuma eyi-9 evuleleke kubakhenkethi kwaye inexabiso elincomekayo. Ungaqesha i-buggy kunye okanye ngaphandle kweeklabhu.
Umbuki zindwendwe ngu- Homemade Holidays
Uninzi lweendwendwe zethu zijonge ukuhlala ngoxolo kunye nokuphumla kwindawo entle kakhulu. Nanini na xa kunokwenzeka iindwendwe ziyabuliswa xa zifika kwaye ziboniswe malunga nepropathi. Ababuki zindwendwe baya kuqinisekisa ukuba iindwendwe zabo ziziva zizithembile ngendlela i-spa, iBarBQ nezinye izixhobo zokusebenza ezisebenza ngayo. Ukuze bakwazi ukonwabela imfihlo enkulu ngexesha lokuhlala kwabo, sifumanise ukuba ukuthumela umyalezo kumamkeli wendawo ukuba kukho nantoni na ayidingayo isebenza kakuhle kakhulu.
Uninzi lweendwendwe zethu zijonge ukuhlala ngoxolo kunye nokuphumla kwindawo entle kakhulu. Nanini na xa kunokwenzeka iindwendwe ziyabuliswa xa zifika kwaye ziboniswe malunga nepro…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-11105
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$694
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Palm Beach